Oohin wanaagsan ayaa si qoto dheer ugu kulmaysa nafta, iyadoo gariiraya oo daadinaysa webi ilmo kulul leh oo wejiga ka soo qulqulaya, ka soo dillaaca garka, oo barkimada ku abuura barkado cusbo leh oo cusbo leh.
Oohin fiican ma fiiriso. Halkii laga dhaafi lahaa murugada, waxay si arxan darro ah u baaraysaa lumis, iyada oo markhaati u ah culeys badan oo murugsan oo urursaday gees walba oo la heli karo. Iyada oo indho fiiqan leh, waxay ku aragtaa lakabyada kelinimada iyo muuqasho la’aanta ka timaadda noloshooda ee darfaha.
Oohin wanaagsan ayaa ka soo baxda bandhig dadweyne oo murugo leh. Waa nebi dharkiisa jeexjeexa oo dhar joonyad ah guntada oo jidadka ku baroorta. Waxay magacowdaa niyad -jabka iyo caddaalad -darrada, waxay dhistaa taallooyin, waxayna abuurtaa meel 38th iyo Chicago loogu talagalay murugada Madow, ka dibna waxay xambaarsan tahay kharashka soo -bandhigidda waxa dadka kale doorbidayaan inaysan arkin.
Oohin wanaagsani sidaas uma dhaceyso. Tuuridda feeraha iyo laadadka, waxay diidaysaa rabitaanka ah in si murugaysan loo kaydiyo murugada. Waxay xoreysaa ruuxa gunuunaca ah ee qanacsanaanta oo ku hanjabaya inay haysato la -haystayaasha hadda iyo kuwa mustaqbalka, waxayna ku qasbeysaa jirka inuu ka shaqeeyo dhaawaca oo dib ugu sii daayo cidlada.
Oohin wanaagsan ayaa ka markhaati kacaysa baahida loo qabo in dib loogu laabto qol qabow oo mugdi ah oo la seexdo hurdada qofka daalan ee runta ah. Halkii laga awood badin lahaa, waxay ku tilmaamaysaa gacan qabow baahida aadamiga ee nasashada iyo soo kabashada.
Oohin wanaagsan ayaa ku faraxsan xiriirinta. Waa beeyo ka mid ah riyooyin wadaagga coterie iyo farxadaha lahaanshaha, aqoonsiga, iyo daryeelka labada dhinac. Waa gargaar dhab ah oo bogsan kara oo beddeli kara.
Oohinta wanaagsani waxay keentaa xorriyad. Geedi socodka kiimikada oo gubta wasakhda oo nafta ka tagta xor. Iyagoo aan doonayn inay ku qancaan dhismayaasha awoodda ee dadka bani'aadamnimada ka baxsan, waxay taageero ka heshaa dhammaan awoowayaashii si loo beddelo xaaladahaas oo looga qaybgalo xoreynta wadajirka ah.
Oohin wanaagsan ayaa timaada sida xanuunka foosha, meel halganka la wadaago halganka iyo filashada hal sentimitir markiiba, oo ku soo biirisa koonkan kartida leh, oo ka soo daadanaya suurtogalnimo fara badan.
Waxaa dhiirigaliyay shaqada Sun Yung Shin iyo qormadii Hiigsi Wacan by Camille T. Dungy.
Qormadani waxay qayb ka tahay a taxane ah milicsiga qofka-koowaad asxaabteena waxay wadaagayaan George Floyd iyo dhaq dhaqaaqa cadaalada.